“Kas ayaa loo jaray internet-ka Muqdisho mana jirto cillad dhacday!” – Netblocks oo sir kashiftay | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka “Kas ayaa loo jaray internet-ka Muqdisho mana jirto cillad dhacday!” – Netblocks...
“Kas ayaa loo jaray internet-ka Muqdisho mana jirto cillad dhacday!” – Netblocks oo sir kashiftay
(Muqdisho) 26 Luulyo 2020 – Hay’adda internet-ka muraaqibaysa ee NetBlocks ayaa xaqiijisay in kas loo jaray internet-ka Somalia gaar ahaan Muqdisho saacaddu markii ay ahayd 10:30 am maanta oo Axad ah ilaa haatan.
Cabbirka hay’addan ayaa muujinaya in 30% uu ka joogo heerkii caadiga ahaa iyada oo ay jugta ugu darani ku dhacayso magaalada Muqdisho.
Arrintan oo sidoo kale saamaynaysa khadkii telefoonnada sida kuwa gacanta iyo laymanka guryaha, ayaan wax xiriir ah la lahayn dhibaato caalami ah, cillad farsamo ama weerar danabeed oo dhanka internet-ka, sida ay hay’addu qoreeyso.
Baaris iyo lafa-gur hordhac ah oo ay samaysay Netblocks ayaa muujinaya in aanu jirin shil, kaybal go’ay ama cillad lala xiriirinayo arrintan oo aad u dhaawacaysa ganacsiyada iyo adeegyada daruuriga ah, maadaama 97% ay dadka Muqdisho adeegadaan lacag danabeed. Waxaan sidoo kale abid horay Somalia uga dhicin internet go’ay ilaa heerkan.
Arrintan ayaa imanaysa maalin uun kaddib markii si qaflad ah xilkii looga tuuray RW Xasan C Khayrre oo fiidkii is casiley isagoo sheegay in xeerka lagu tuntay.
Arrintan ayaa halis wayn ah noqon doonta haddii ay caddaato inay DF jartay adeegga internet-ka.
Previous article“In yarna lama ixtiraamin Dastuurkii aan maalgelinney!” – Midowga Yurub oo dhaliilay qaabkii xilka looga qaaday Khayrre (Maxay ballan qaadeen?)
Next articleRASMI: Hormuud oo war kasoo saartay sababta uu u go’ay khadka internet-ka Muqdisho